Cornstarch खाद्य कन्टेनर निर्माताहरु चीन Cornstarch खाद्य कन्टेनर कारखाना र आपूर्तिकर्ता
Skypurl को जाने मकई स्टार्च lids संग खाना कन्टेनर खाना बाहिर र वितरण सेवाहरु को लागी उत्कृष्ट कन्टेनर बनाउँछ। कटाईएको मकै बाट मकै को स्टार्च बाट बनेको, यी खाद्य कन्टेनर ग्लुटेन-मुक्त, पर्यावरण मैत्री, माइक्रोवेव र ओभन सुरक्षित छन्। उनीहरु प्लास्टिक र Styrofoam कन्टेनर को लागी सही विकल्प हुन्!
Skypurl को cornstarch 3/4/5 भागहरु lids संग खाना कन्टेनर तयार र वितरण खाद्य बिक्री को लागी उत्कृष्ट कन्टेनर बनाउँछ। कटाईएको मकै वा बर्बाद मकै बाट प्राकृतिक फाइबर मा कम्पोस्टेबल सामग्री बाट बनेको। यी बक्सहरु गैर विषाक्त, ग्लुटेन मुक्त, पर्यावरण मैत्री, र कुनै मोम अस्तर छन्। हामी पनि १००% कम्पोस्टेबल बाहिर झोला उनीहरुलाई बाहिर लैजान।
Skypurl को Cornstarch कटोरा पर्यावरण मैत्री र बहुमुखी छन् र सूप वा acai कटोरा वा आइसक्रीम कप को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आकार को एक किस्म मा उपलब्ध छ, तिनीहरू biodegradable छन्। र हाम्रो cornstarch खाना कन्टेनर तातो सूप को लागी एकदम सही छ र आइसक्रीम र toppings, जमेको दही वा acai कटोरा को scoops को लागी कोठा को अनुमति दिन्छ।हम कस्टम छपाई को लागी तपाइँको ब्रान्ड संग तपाइँको कटोरा अनुकूलित गर्न को लागी प्रस्ताव गर्दछ।
Skypurl को Cornstarch गोल प्लेट को संग्रह टिकाऊ फाइबर, cornstarch बनेको छ। उनीहरु एक सही पर्यावरण मैत्री विकल्प एकल उपयोग डिस्पोजेबल फोम वा भोजन मा रेस्टुरेन्ट सेवा वा कुनै घटना को लागी प्लास्टिक प्लेटहरु लाई प्रतिस्थापन गर्न को लागी हो।
Skypurl को inch इन्च डिस्पोजेबल Cornstarch हैम्बर्गर बक्स पश्चिमी फास्ट फूड को लागी एकदम सही छ, यो मा खान वा टाढा लिन को लागी उपयुक्त छ। हाम्रो clamshells cornstarch, जो प्रकृति द्वारा अपमानित गर्न सकिन्छ बाट बनेका छन्। नवीकरणीय सामग्री को उपयोग संग, हाम्रो हैमबर्गर बक्सहरु प्लास्टिक tableware को लागी एक उपयुक्त विकल्प हो!
Skypurl को Cornstarch Clamshells बिरुवा आधारित, ग्लुटेन मुक्त र फोम र प्लास्टिक को लागी एक स्वस्थ विकल्प प्रदान गर्दछ। तपाइँको स्वस्थ, ताजा खाना हाम्रो पर्यावरण मैत्री, compostable कन्टेनर बाहिर लिन र बक्सहरु मा सुन्दर देखीनेछ। ग्राहकहरु तपाइँको उच्च गुणस्तरीय रेस्टुरेन्ट आपूर्ति संग तपाइँको स्थायित्व को प्रयास को सराहना गर्नेछन्। छिटो ढुवानी संग थोक मूल्यहरु मा टिकाऊ सामाग्री र उत्पादनहरु को हाम्रो विशाल विविधता पसल!
Skypurl को Cornstarch खाद्य ट्रे दैनिक खाना संरक्षण को उपयोग को लागी एकदम सही छ, यो घर मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, सुपरमार्केट, किराना पसलहरु र आदि हाम्रो खाना ट्रे मकई स्टार्च बाट बनाइन्छ नवीकरणीय बिरुवा संसाधनहरु को एक प्रकार हो, जो केहि निश्चित प्रकार मा कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ औद्योगिक स्थिति। प्लास्टिक tableware को लागी एक राम्रो विकल्प प्रदान गर्दै।